Matipi Ekudzivisa Brand Kushatirwa neyako Email Chirongwa | Martech Zone
Matipi Ekudzivirira Brand Kushatirwa neyako Email Isu
Chitatu, Ndira 16, 2013 Chitatu, Ndira 16, 2013 Douglas Karr
Isu tichangobva kuburitsa infographic pa kuongorora kutsva uko vatengi vari kuramba vachipokana nekugara vachirohwa neongororo. Pazvitsitsinho zveichi kuongorora kukuru kwakapihwa na Emailview pamusoro pokuti kubhomba vatengi kunogona sei kukonzera kutsamwa kwechiso.
The YouGov uye Emailview kutsvagisa kwakabvunza vatengi maonero avo pane yekushambadzira tsamba, uye inojekesa pane zvisirizvo vatengesi vangave vari kutora izvo zvinogona kuunza mhando chigumbu. Chidzidzo chakawana:
75% yakashuma kuti vaizoshatirwa nemucherechedzo mushure mekubhombwa nemaemail
71% vakataura nekutambira mameseji asina kukumbirwa sechikonzero chekutsamwa
50% vakanzwa kuita zita ravo zvisirizvo yaive chikonzero chekufunga kushoma kwechiratidzo
40% vakataura kuti kukanganisa gender kunokanganisa
Nezvikamu zviri nani uye kunongedza, vashambadziri vanogona kudzivirira misungo iyi, zvisinei izvi zvinonetsa kana vatengi vakaramba vasingadi kupa ruzivo rwekutanga:
Chete 28% yakaratidza kuti vangangoda kugovera zita ravo
Chete 37% ndivo vangangoda kugovana zera ravo
Chete 38% muzana ndivo vaizoburitsa hunhu hwavo
Matipi epamusoro ekugadzira yakangwara email kushambadzira mushandirapamwe
Shandisa tekinoroji kubvarura musiyano uripo pakati pechiratidzo nevatengi vavo: Kukurukurirana kwese mutengi ane bhizinesi repamhepo, kubva kubhurawuza pawebhusaiti, kuvhura uye tinya paemail, kune iyo tweet, kana iyo yekutenga-muchitoro inogona kutorwa kuti ibudise data rakakosha. Nhasi kune chizvarwa chitsva che software chakazvipira kubatsira mabhizinesi kuti anzwisise iyi data inonzi Customer Intelligence. CI tekinoroji inogonesa vashambadzi kuvaka yakanangwa uye yakasarudzika kushambadzira iyo yakavakirwa pane zvakajairwa vatengi ma profiles uye / kana wemubhadharo wekare kudyidzana neiyo brand.
Svika pakuziva mutengi wako: Vatengi vanhu uye vatengesi vepamhepo vanofanirwa kuvaka hukama-kune-mumwe navo. Nekuvandudza mameseji akanangwa, zvigadzirwa zvepamhepo zvine mukana wekufadza vatengi neruzivo rwavo. Kubudikidza nekubata uku kwega, makambani anokwanisa kutaura nenzira inoenderana uye nekubatana.
Kurudzira mutengi wako: Vatengi vanoda kunyengetedzwa kuti vape data ravo. Kushandisa makwikwi uye kupihwa mari-kukwezva kukwezva kwavo kuchavabatsira kuti vanzwe kubatsirwa kwekugovana yavo data.
Musoro uye email nyaya: Kufona kwese kune chiito kunofanirwa kusimbisa kukosha mukutora chiito ichocho, saka tora mukana, gadzira mufaro uye uunze kuhupenyu chiitiko icho chinyorwa chako chinoputira. Uku kudaidzwa kwekuita kunofanirwa kuendeswa mumutsara wenyaya uye kusimbiswa mune zvirimo mukati meemail. Inoshanda sekutanga kufunga uye kukosha kwenyaya yemusoro wenyaya kunoona kuti email ichavhurwa here kana kuti icharamba yakarasika mubhokisi rebhokisi.
Gadzirisa zvaunopa: Usarega kungwara kwevatengi kuchipera. Yepamberi yekutenga maitiro uye ruzivo rwekuti vatengi vanokupa iwe nekufamba kwenguva zvinogona kushandiswa kugadzira zvakanangwa mishandirapamwe. Kugadzirisa zvaunopa zvinogona kureva mutsauko pakati pekudzvanya nekutengesa.
Chenjera - Google Search Console Inoregedza Yako Longtail
ROI Inowedzera Yemagariro Scoring yeMarket Automation